Minisitry ny Fitsarana: “Tsy hahazoana famotsorana ny heloka bevava” | NewsMada
Minisitry ny Fitsarana: “Tsy hahazoana famotsorana ny heloka bevava”
Nitondra fanazavana momba ny famotsoran-keloka, araka ny nanambaran’ny filoham-pirenena izany ny minisitry ny Fitsarana Randrianasolo Jacques. Tsy natao ho an’ny rehetra akory izany araka ny nambarany.
“Misy fepetra jerena fa tsy hoe hahazo izay famotsoran-keloka izay avokoa akory ny voafonja rehetra”, hoy ny minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques, teny Tsaralalana, afakomaly, momba ny hanomezan’ny filohan’ny Repoblika famotsoran-keloka faobe, araka ny nambarany tany Fianarantsoa, ny 27 septambra lasa teo.
Ny mpanao fakana an-keriny sy ny mpamono olona, ohatra, tsy hahazo famotsoran-keloka. Toy izany koa ny mpanodinkodina volam-panjakana. Ireo heloka tsotra mandinika no hahazo izany. Misy heloka tsotra tsy inona akory, nefa tonga dia migadra ny olona. Ireny no tena jerena. “Efa nalefanay any amin’ny filoham-pirenena ny rijan-teny, inoana fa hamoaka an’izay izy ato ho ato izy”, hoy ny minisitry ny Fitsarana.
Mila fantenina ireo voafonja
Mila fantenina ireo voafonja fa misy ny tsy tokony homena izay famotsoran-kelomka faobe izay mihitsy. Satria tena fanetribem-pirenena izay nahavita fanodinkodinam-bolam-panjakana, asan-jiolahy, famonoana olona… Ireny aza hanaovana fonja manara-penitra sady tsara ambina, araka ny namabaran’ny filohan’ny Repoblika. Jerena ihany koa ny fepetra eo amin’ny taona: misy voafonja efa lehibe ary efa nahavita ny saziny maromaro koa, araka ny fanazavany.
Notsiahiviny fa efa tokony ho nataon’ny filohan’ny Repoblika, tamin’ny 26 jona izay famotsoran-keloka faobe izay, nefa tratra aoriana kely amin’izao. Izao izy vao tena mahafantatra ny hamaroan’ny voatana any amin’ny fonja, tsy araka izay zakan’ny fonja, ary mieritreritra hanome izay famotsoran-keloka izay ato ho ato.